My Temporary Girlfriend - 손아름 - Wattpad
My Temporary Girlfriend
62.2K Reads 7.2K Votes 62 Part Story
By xolovetharaphi Ongoing - Updated Jan 24
ဒီ relationship က scandal တစ်ခုကြောင့် ဟန်ဆောင်တွဲရာကနေစခဲ့တယ်။
Tiffany Hwang က Nichkhunနဲ့ ဖုန်းကွယ်ထားတဲ့ relationship ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမရဲ့ imageနဲ့ သူ့ကို ထိန်းသိမ်းရန် Kim Tae Yeonနဲ့ fake relationship စတဲ့အခါမှာ ဘာဖြစ်လာမလဲ။ သူတို့ မိသားစုရဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကရော ဘာဖြစ်လာမလဲ။ Tae Yeonနဲ့ Tiffanyကရော သူတို့တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကံစီမံရာပါလာတယ်ဆိုတာရော သတိထားမိမှာလား? အရမ်းနောက်မကျခင်မှာဘဲ သူတို့ တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ဟဝန်ခံကြမလား ?
~~This Story is Not Mine~~
Cr. Original Author
Chapter 28 [Yulsic]
Get notified when My Temporary Girlfriend is updated
#23 in taeny See all rankings
Yes..Teacher..I'm Your Cute Pupil
17.8K 1.5K 267
ဖတ်ပေးတဲ့ Reader အားလုံးကျေးဇူးပါ...
147K 7.7K 766
43.9K 2.7K 193
Asian Fanfic ကနေ ဘာသာပြန်ရေးထားတာပါ။ ပထမဆုံးရေးတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အဆင်မပြေမှုများရှိခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါတယ်။မူရင်းနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးစ်ြအောင် ကြိုးစားထားပါတယ်။ E skill သိပ်မကျွမ်းတဲ့ အတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 🙇🙇🙇🙇
ပြီးတော့လေ မူရင်း Fic မှာက M senseတွေပါနေတယ် ခြေနေကြည့်ပီးမှမဲ ထည့်ဖြစ်ရင်လည်း ထည့်လိုက်မယ်
Credit to Original Author from Asian Funfic
14.3K 2K 438
လမင်းမိုမိုရဲ့ မောင်ဝတ္ထုကို TaeNy ver ပြန်လည်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ❤
25.4K 3.2K 263
လူသားရဲ့အားအင်နဲ့အသက်ဆက်ရတဲ့vampireမလေးနဲ့ အသန့်ကြိုက်လွန်းတာက ရောဂါတခုလိုဖြစ်နေတဲ့ လူသားကောင်မလေး
ထိုလူသားကောင်မလေးနဲ့မတော်တဆနဲ့ထိမိရာက စွဲလမ်းသွားတဲ့ vampireကောင်မလေးတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်း
ဒီဇာတ်လမ်းက authorရဲ့ own creation မဟုတ်ပါဘူး mangaတပုဒ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုသဘောကျလို့Taeny versionနဲ့ရေးထားတာပါ
40.5K 3.1K 328
Taeyeon➳ ➳ ➳
Tiffany ❦ ❦ ❦
Imyoona ♨ ♨ ♨
Jessica Jung ❆ ❆ ❆
yuri fic ​လေးပါ 💌
အချစ်စိတ်မှ ပေါက်ဖွားလာသော အမုန်းမီး
21K 2.6K 626
Criminal minds ဇာတ်ကားထဲက..
Lee Sun Binကို.ထည့်ရေးသွားမှာပါ..။
59.1K 3.3K 392
Main Cast:Kim Taeyeon,
14.1K 4K 831
26K 2.7K 1K
" ​လောကကြီးမှာရှိတဲ့ အရာ​တွေအားလုံး ​
နင့်​အ​ပေါ်မှာထားရှိတဲ့ ငါ့ရဲ့​မေတ္တာတရားက ဘယ်​​တော့မှ ​ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်​ဘူး ...
ငါ့အတွက်​​တော့ နင်က  အမြဲထာဝရ တစ်​ဦးတည်း​သော ..."